WINDOSE7ရက်နေ့တွင်ယာဉ်မောင်းကို UPDATE လုပ်နည်း - WINDOWS ကို - 2019
Windows7တွင်ယာဉ်မောင်းကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
သငျသညျအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်သည့်အခါမဆို Android ကိုကိရိယာတွင်, သငျသညျ built-in သုံးပြီးဖိုင်တွေနဲ့ application များဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာတခါတရံဒေါင်းလုတ်လုပ်ဒြပ်ပေါင်းကန့်သတ်နိုင်ဖို့အသွားအလာ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုစားသုံး, မတော်တဆအစပျိုးစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးစဉ်အတွင်းကျွန်တော်တက်ကြွစွာ downloads, ရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှကူညီပေးပါမည်။
Android ပေါ်မှာ downloads, ရပ်တန့်
စဉ်းစားနည်းလမ်းများမသက်ဆိုင်ဒေါင်းလုဒ်များ၏အကြောင်းရင်း၏, မည်သည့်ဖိုင်ရဲ့ download, နှောက်ယှက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable ပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးကိုပင်စိတ်ထဲ၌ဤအတူကအော်တို mode မှာစတင်ခဲ့သက်တမ်းတိုး applications များ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့မအကြံပြုလိုတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးပြန်လည် install ပြုလုပ်လိုအပ်, စနစ်တကျအလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အဘို့အက Auto-update ကို disable လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဂရုစိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Android ပေါ်မှာ applications များ၏အလိုအလျှောက်မွမ်းမံ disable လုပ်နည်း
Method ကို 1: Panel ကိုအကြောင်းကြားစာများ
ဤနည်းလမ်းကိုသည် "မျက်စိကန်း" မသက်ဆိုင်အရင်းအမြစ်များ၏ဒေါင်းလုပ်စတင် Cancel ခွင့်ပြုအပါအဝင်အချို့သောအပြောင်းအလဲခံထားပြီးဘယ်မှာအန်းဒရွိုက် Nougat7နှင့်အထက်, သင့်လျော်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ကြားဖြတ်ဖို့ခြေလှမ်းတစ်ခုအနည်းဆုံးအရေအတွက်ကလုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။
တက်ကြွစွာလျှောက်လွှာနှင့်အတူသို့မဟုတ်ဖိုင်တစ်ဖိုင်ဒေါင်းလုပ်, ချဲ့ထွင် "သတိပေးချက်ဘား" သငျတို့သ cancel ချင်သောဒေါင်းလုပ်ရှာပါ။
ပစ္စည်း၏အမည်နှင့်အတူလိုင်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါအောက်ပါခလုတ်ကိုသုံးပါပေါ်လာပါလိမ့်မယ် "Cancel"။ ဒီဒေါင်းလုပ်ချက်ချင်းရပ်စဲပါလိမ့်မည်နှင့်ဖျက်မှုဖိုင်တွေထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်ပြီးနောက်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, မလိုအပ်တဲ့ဖယ်ရှားပစ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အရှိဆုံးအလွယ်တကူတင်ညွှန်ကြားချက် "ချိတ်ဆွဲ" ။ အန်းဒရွိုက်၏အစောပိုင်း version များတွင်အသုံးပြုသည်အခြားနည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအထူးသဖြင့်အခါ။
နည်းလမ်း 2: "Download Manager"
သင်က Android platform ပေါ်တွင်အများစု Device အဟောင်းတွေအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကပထမဦးဆုံးလမ်းတင်စကေးအပြင်ကတည်းကအသုံးမကျပါလိမ့်မယ် "သတိပေးချက်ဘား" ဒါဟာမဆို tools တွေကိုပေးမထားဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျစနစ်လျှောက်လွှာနှုနျးနိုငျသညျ "Download Manager"သူ့အလုပ်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အရှင်အားလုံးတက်ကြွစွာ downloads, ဖယ်ရှားခြင်း။ နောက်ထပ်အမည်များကိုအန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းများနှင့် shell ကိုပေါ် မူတည်. အနည်းငယ်ကွဲပြားလိမ့်မည်။
မှတ်ချက်: Downloads Store မှာ Play ဂူဂဲလ်အတွက်ကြားဖြတ်မည်မဟုတ်ပါနှင့်ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။
ပွင့်လင်းမှုစနစ် "Settings" ကို သင်၏ဖုန်းတွင်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဤအပိုင်းကိုမှ scroll "စက်ပစ္စည်း" နှင့်ကို select "Applications ကို".
အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာ, သုံးစက်နှင့်အတူ icon ကို click ပါနှင့်စာရင်းထဲက select လုပ်ပါ "Show ကိုစနစ်ကလုပ်ငန်းစဉ်များ"။ အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းအဟောင်းအပေါ်လုံလောက်စွာအဆိုပါ eponymous tab ကိုမှစာမကျြနှာညာဘက် scroll သတိပြုပါ။
ပစ္စည်းရှာဖွေသုံးစွဲဖို့လိုအပ်သောကြောင့် "Download Manager"။ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ပလက်ဖောင်းအိုင်ကွန်၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းတွင်ကွဲပြားသော်လည်းနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အမြဲအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Stop", ပေါ်လာသော dialog box ကိုကနေတဆင့်အရေးယူအတည်ပြုပါ။ ထိုနောက်မှလျှောက်လွှာမသန်စွမ်းဖြစ်ပြီး, မည်သည့်အရင်းအမြစ်မှဖိုင်များအားလုံးကို download လုပ်ပါပြတ်တောက်လိမ့်မည်။
ဤနည်းလမ်းကို, အန်းဒရွိုက်မဆိုဗားရှင်းအချိန်ပမာဏကြီးမားတဲ့ကြောင့်ပထမဦးဆုံးဂျထက်သော်လည်းလျော့နည်းထိရောက်သောတစ်လောကလုံးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ပြိုင်နက်တည်းနဲ့အတူတူပါပဲအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လုပ်စရာမလိုဘဲ, ရှိသမျှဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ်ဆွဲရပ်တန့်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ရပ်တန့်ပြီးနောက် "Download Manager" ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လာမည့်ကြိုးပမ်းမှုအလိုအလျှောက်ပါကမြှင့်လုပ်ဆောင်။
Method ကို 3: Google က Market က Play
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တရားဝင်စတိုးဆိုင် Google ထံမှလျှောက်လွှာကို download ရပ်ဆိုင်းထားသောသူ၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ သငျသညျအပျေါပြရန်အမည်သုံးပြီးလိုအပ်သောလျှင်တွေ့မှစတိုးဆိုင် Play ဂူဂဲလ်အတွက် software ကိုပြန်သွားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည် "သတိပေးချက် Panel ကို".
Play Store app ကိုအတွက်လျှောက်လွှာထဲမှာ, download, bandwidth ကိုရှာဖွေလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပုံရိပ်နှင့်အတူအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ထို့နောကျထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချက်ချင်းကြားဖြတ်ဖြစ်ပြီး, ဖိုင်တွေကို device ကိုမှဆက်ပြောသည်နေကြသည်ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဒီနည်းလမ်းမှာပြီးပြည့်စုံသောအဖြစ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
Method ကို 4: ဖြုတ်ခြင်း
ကသာတစိတ်တပိုင်းဒေါင်းလုပ်ကိုရပ်တန့်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုအဖြစ်ယခင်ဗားရှင်းမတူဘဲ, ဒီပိုဖြည့်စွတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ အပြင် Downloads "လှုပ်ရှား" ဒေါင်းလုဒ်ရိုးရှင်းစွာအသုံးမရသောရှိရာအခြေအနေကိုနိုင်ပါတယ်မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမှားပါလိမ့်မယ်ဖော်ပြထားခြင်းမထားဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ပါကအတင်းအကြပ်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုရပ်ဆိုင်းဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
ကိုသွားပါ "Settings" ကို '' စက်ပေါ်ရှိ နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်" စာနယ်ဇင်းများ "ပို".
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်, switch သည်ကိုအသုံး "လေယာဉ်ပျံ Mode ကို"ထိုသို့သောအားဖြင့်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းမဆိုချိတ်ဆက်မှုကိုပိတ်ဆို့။
ကြောင့်ချွေတာအထက်ပါလုပ်ရပ်များမှမှားယွင်းမှုတစ်ခုနှင့်အတူပြတ်တောက်လိမ့်မည်, သို့သော်ဆိုပါတယ်စစ်အစိုးရကချိတ်ဆက်မှုကိုဖြတ်တောက်သည့်အခါပြန်လည်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီမတိုင်မီက, သင်ပထမဦးဆုံး download, လုပ်ငန်းစဉ်အားဖျက်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်ရှာပြီးရပ်တန့်သင့်တယ် "Download Manager".
Options ကို Internet မှဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်တွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့လုံလောက်တဲ့, ပေမယ့်မရရှိပြီးသားရွေးချယ်စရာအပေါင်းတို့ထက် သာ. သွင်းစဉ်းစား။ အဆိုပါနည်းလမ်းအားရွေးချယ်ပါကစက်ကိရိယာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင်ပြေရဲ့ features တွေကိုအနေဖြင့်စတင်ဖြစ်သင့်သည်။
ဗီဒီယို Watch: What Happens When Windows7DIES? (အောက်တိုဘာလ 2019).